LR41: mụtakwuo gbasara sel ndị a ma ọ bụ batrị | Ngwaike efu
Enwere nnukwu ego batrị dị iche iche voltaji, ikike, yana kwa nwere ọtụtụ ụdị. Onye ọ bụla dabere na ụdị ngwaọrụ akọwapụtara. Anyị enyochalarị otu n'ime ha n'oge gara aga, dịka ọ dị Ngwa CR2032. Ugbu a, n'isiokwu a, anyị ga -enyocha "nwanne nwanyị" nke a, dịka ọ dị LR41, nke bụkwa nke batrị akpọrọ bọtịnụ.
Njirimara ya na -eme ka ọ dị mma maka ụfọdụ ụdị ngwa ebe nha na ogologo oge dị mkpa, yana ume anaghị achọ ka ọ dị na nnukwu ngwaọrụ ndị ọzọ ...
1 Kedu ihe bụ LR41 batrị?
1.1 Ebe ịzụta batrị LR41
2 More gbasara batrị
2.1 Dị batrị
2.1.1 Enweghị ike ịgbanye ya
2.1.2 Na-akwụghachi ụgwọ
Kedu ihe bụ LR41 batrị?
La batrị ma ọ bụ batrị LR41 ọ bụ ụdị batrị n'ime ezinụlọ bọtịnụ. A na-ewerekwa ya dị ka alkaline na anaghị akwụghachi ya. Voltaji ya bụ 1.5 volts, nwere obere pere mpe maka ngwa eletrọnịkị nke chọrọ ume dị ala, dị ka elekere, ihe ntụnyere laser, ihe mgbako, na ngwa elektrọnik ndị ọzọ.
Banyere ihe mejupụtara sel ha, ụdị batrị a na -eji kemịkal dị iche iche maka iji ya eme ihe. N'iji mkpuchi igwe dị na mpụga nke osisi ya dị mma bụ akụkụ dị larịị ebe ihe odide na -enwekarị, yana ihu na -abụghị osisi na -adịghị mma. Maka ogologo oge, ha nwere ike nọrọ ruo afọ 3 na nchekwa.
Ebe ịzụta batrị LR41
Ị nwere ike ịchọta ụdị batrị ndị a n'ọtụtụ ụlọ ahịa pụrụ iche, n'agbanyeghị na ọ naghị adịrị ha mfe ịchọta dị ka ụdị A, nke na -ewu ewu. Agbanyeghị, na nyiwe dị ka Amazon ị nwere ike zụta kwa otu ma ọ bụ na ngwugwu:
Mkpokọta Maxell nke ụdị batrị 10 bụ LR41
Mpempe kamelion nke nkeji abụọ LR2
Otu Duracell 376/377 LR41
More gbasara batrị
Ọ ghaghị ịbụ dị iche n'etiti batrị na batrị, n'agbanyeghị na a na -eji okwu abụọ a enweghị mmasị (ihe kpatara ya bụ okwu batrị n'asụsụ Bekee, nke na -edochaghị anya ma na -arụ ọrụ maka ha abụọ), ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị na -akpachapụ anya, ị nwere ike ịme ihe ndị a:
Batrị: batrị nwere ike nwetaghachi ụgwọ ya ma ọ bụrụ na enyere ya ọkụ eletrik, ya bụ, enweghị batrị anaghị agbaji. Tụkwasị na nke a, ha na-ata onwe ha ahụhụ n'ime ụbọchị ma ọ bụ ọnwa mgbe ejighị ha.
Pila. Kama nke ahụ, enwere ike idobe ha ruo ọtụtụ afọ na-enweghị nnukwu ọpụpụ onwe ha.
Enwere ike kewaa stacks n'ime nnukwu ezinụlọ abụọ, na n'ime ha, ha nwekwara ike ịga n'ihu na -edepụta ha n'ụdị na njirimara:
Enweghị ike ịgbanye ya
na batrị ndị na-anaghị akwụ ụgwọ ekwesighi ịnwa ibu, n'ihi na enwere ike imebi ha, emeghị ha maka nke ahụ. Emebere ha maka naanị otu ihe. N'ime otu a bụ:
Ebube: ha bụ ndị kacha ewu ewu, yana ndị ị nwere ike ịhụ na elekere mgbidi, njikwa ime obodo, wdg. N'ime ndị a bụ:
Alkaline: juru ebe niile taa. Ha mejupụtara zinc dị ka anode na manganese dioxide dị ka cathode. Ụdị batrị a na -adịte aka, ekwesịrị idobe ya gburugburu 25ºC ma ọ bụ obere maka nchekwa nke ọma. Dabere na nha, enwere AA (LR6), AAA (LR03), AAAA (LR61), C (LR14), D (LR20), N (LR1) na A23 (8LR932), ha niile bụ 1.5 volts ma nwee nha dị iche iche. , ewezuga nke ikpeazụ nke bụ 12V.
Salinas: batrị ndị a nwere zinc-carbon, ma na-arịwanye elu na-ejighị ya n'ihi ikike na obere oge ha na-atụnyere nke alkaline. Ị ga -ahụkwa otu ụdị, dịka AA, AAA, AAAA, wdg, mana ha nwere koodu IEC na ANSI dị iche iche.
Lithium: Ha gụnyere lithium na ihe mejupụtara ha, enwere ike nwee ụdị dị iche iche nwere mwepu onwe ha nke ukwuu, naanị 1% kwa afọ. Na mgbakwunye, ha nwere oke ọrụ dị obosara, site -30ºC ruo 70ºC. N'ime ị nwere ike ịhụ nke igwe na dishiidị lithium, dị ka AA ma ọ bụ AAA nke 1.5v, nke lithium-thionyl colouro nke 3.6v, nke manganese dioxide-lithium, nke 3v ...
Akụkụ anọ: Dị ka aha ha na -egosi, ha bụ batrị nwere akụkụ anọ, dị iche na nke cylindrical. N'oge gara aga, ha na -ewu ewu nke ukwuu, n'agbanyeghị na taa anaghị eji ha nke ukwuu n'ihi nha ha. N'ime ndị a, enwere ike iru voltaji karịa 4.5v.
Alkaline: ndị a maara dị ka LR nwere ike ịdị site na 4.5v maka mkpọ batrị ma ọ bụ 3LR12, ruo 9v maka PP3 (6LR61), site na 6v maka batrị ọkụ (4LR25).
Salinas: Dị ka ọ dị na nke cylindrical, ha adaala n'iji, a naghị ejikarị ya eme ihe, naanị maka ngwa akọwapụtara nke ọma ebe ha nwere ike nweta uru karịa nke alkaline. Ịchọta ụmụ nwoke dịka PP6 na PP9 ...
Lithium: Enwekwara batrị lithium dị square, na -enwekarị lithium thionyl chloride ma ọ bụ lithium manganese dioxide. 9v abụọ.
Bọtịnụ: n'ime ngalaba a LR41 nke edemede a ga -abanye. Ha bụ batrị nke, dị ka aha ha na-egosi, nwere ụdị bọtịnụ. A na -eji ha maka ngwaọrụ nwere obere ọkụ eletrik na obere nha, dị ka elekere, ihe na -anụ ihe, wdg.
Alkaline: ha bụ batrị 1.5v, nwere koodu dịka LR54, LR44, LR43, LR41 na LR9.
Lithium: enwekwara ụfọdụ nwere voltaji nke 3v. Na ogologo ndụ bara uru ma nwee ike ịrụ ọrụ na oke oke okpomọkụ. Batrị ndị a bụ akara CR maka batrị lithium manganese dioxide na BR maka lithium-polycarbonate monofluoride batrị (lithium thionyl chloride dịkwa, n'agbanyeghị na ha dị ụkọ, yana 3.6v na ndụ nwere ike gafere afọ 10, maka ngwa dị mkpa yana koodu TL). Dịka ọmụmaatụ, CR1025, CR1216, CR2032, BR2032, CR3032, wdg. Ha niile nwere akụkụ dị iche iche.
Ihe nchara ocha: ha nwere ike iru 1.55v ma nwee ezigbo arụmọrụ ikuku dị ala. Koodu SR dị ka SR41, SR55, SR69, wdg.
Mkpụrụ ndụ ikuku-zinc. Na ụdị nke 1.4 volts. Koodu ya bụ PR, dị ka PR70, PR41 ...
Batrị igwefoto: Ha yiri nke gara aga, yanakwa lithium, mana ha na -abịakarị na ngwugwu pụrụ iche maka ngwaọrụ ndị a. Ha buru oke ibu, ma nwee ike ịnye voltaji site na 3 ruo 6 volts. Na koodu CR n'okwu a. Dị ka CR123A, CR2, 2CR5, CR-V3, wdg.
Dị ka aha ya na-egosi, ha bụ batrị, ọ bụ ezie na ọtụtụ na-ekwu batrị na-agbanye ọkụ (n'eziokwu, ha nwere ike nwee otu ụdị ahụ wee yie batrị na-anaghị agbaji). Achọghị ụdị batrị ndị a maka otu ihe, mana enwere ike iji ya ugboro ugboro, yana ọtụtụ usoro ịgbapụta ụgwọ. Ndị kachasị ewu ewu bụ:
Ejila chaja NiCd ma ọ bụ NiMH maka batrị lithium, ma ọ bụ nke ọzọ. A ghaghị iji nke ziri ezi na nke ọ bụla.
NiCdBatrị nickel-cadmium ndị a bụ ndị ama ama, a na-ejikwa ha obere ma ọ bụ obere n'ihi mmetụta ncheta ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ikike ya na -ebelata site n'iji ya eme ihe. Ha nwere ike ịdịru ihe dị ka ụgwọ 2000 na oge ịgbapụta, nke bụ ọpụrụiche.
NiMH: ha na -ewu ewu nke ukwuu, ha enweghịkwa ebe nchekwa dị ka nke gara aga. Na mgbakwunye, ha na -akwado njupụta ike dị elu, nke dịkwa mma. Ha nwere oke mwepụ nke onwe ha yana obere chaja dị ala ma e jiri ya tụnyere NiCd. Ha na -enwekwa mmetụta karịa maka mgbanwe nke okpomọkụ. Ha na-adị n'agbata 500 na 1200 okirikiri ụgwọ nchaji.
Li-ion: ha bụ ndị kacha eji taa maka ọmarịcha ihe ha. Ha na -akwado njupụta ike dị elu n'otu sel karịa NiCd na NiMH, yabụ enwere ike wulite ha nke ọma na nke dị fechaa. Mmetụta ebe nchekwa ha bụ ihe a na-eleghara anya, dịkwa ka ọnụego mwepụta nke onwe ha, mana ha nwere isi adịghị ike, ebe ọ bụ na ogologo ndụ ha anaghị erute okirikiri NiCd. N'okwu a, ha dị n'agbata narị anọ na narị anọ na-agbapụta nchaji ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » LR41: mụtakwuo gbasara batrị ndị a
Photodetector: ihe ọ bụ, ihe ọ bụ maka yana ka o si arụ ọrụ